Dagaal xoogan oo Ka Socda Gobolka Galgaduud | Wardoon
Home Somali News Dagaal xoogan oo Ka Socda Gobolka Galgaduud
Wararka aan ka helayno degaanka Bulacle ee Gobolka Galgaduud ayaa ku warramaya in dagaal xooggani uu ka socdo Gobolkaasi, waxaana lasoo sheegayaa in uu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi oo ah mid xooggan.
Dagaalka ayaa u dhexeeya Al-shabaab iyo Ciidanka Dowladda, waxaana lasoo sheegayaa in haatan uu socda dagaalku, jugta iyo rasaasta ayaa si xooggan looga maqlayaa degaanno hoostaga Bulacle, waxana dadka degaanku ay soo sheegayaan in marba mark aka dambeysa uu sii xoogaysanayo dagaalku.
Ciidanka Dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhawaanaahan waday is Abaabul iyo howlagallo bakllaaran ayaa lasoo sheegayaa in Al-shabaab ay kula dagaalamayaan degaanka iyo tuulooyin kale oo hoostaga.
Wali ma cadda Khasaaraha rasmiga ah eek a dhashay dagaalka, balse waxaa jira sida warar hoose ay sheegayaan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya, waxaana adag in la helo tirada rasmiga ah eek u dhimatay dagaalkaasi ama ku dhaawacantay.
Ciidanka Dowladda ayaa Al-shabaab waxaa ay kala wareegeen dhawaan degaanno iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Galgaduud, waxaana ay Saraakiisha Ciidanka hor kacaysa ay sheegeen in ay qadi doonaan dagaal xooggan oo Al-shabaab ay kaga saarayaan Gobolkaasi, balse dagaalamyaasha Al-shabaab ayaa ku xooggan qaar ka mid ah degmooyin ka tirsan Maamulka Golmudug.
Previous articleDonald Trump oo sheegay in kushubaasho xooogan kasocoto doorashada
Next articleBoqolaal katirsan ciidanka Itoobiya ee Somaliya joogay oo laceliyay
Abaadir’Waan ka naxay inaan Macalinkeygi Ka Guuleystay’+VIDEO